Ha mepụtara ngwa ọrụ ọhụrụ iji mara ihe ịrịba ama nke mgbanwe ihu igwe | Network Meteorology
Ha mepụtara ngwa ọrụ ọhụrụ iji mara ihe ịrịba ama nke mgbanwe ihu igwe
Knowingmara ihe ịrịba ama nke mgbanwe ihu igwe dị mkpa iji mepụta ụdị amụma na ịmepụta amụma mgbochi maka ọdachi ọ nwere ike ibute. Ya mere, nnyocha nke ngalaba nke URJC Nbanye na Usoro Nkwukọrịta (Spain) amalitelarị algorithm (nchịkọta nke ọnụ) akpọ SODCC (Second-Order Data-Coupled Clustering) nke na-enyere aka nyochaa data ihu igwe iji chọọ ihe ịrịba ama ọhụrụ na ihe akaebe nke mgbanwe ihu igwe.
Site na ozi a ezubere ya mee atụmatụ ma melite ugbo ifufe, na-abawanye arụmọrụ nke ike ume ma na-ezere, n'aka nke ya, nnukwu ikuku gas na-ekpo ọkụ nke na-enyere aka na mgbanwe ihu igwe.
1 Ngwaọrụ ọhụrụ
2 Mee ka ugbo ikuku di nma
Ọ bụ ngwa ọrụ emebere maka iji rụọ ọrụ na netwọọkụ mmetụta dị ukwuu. Ihe data edere na ugboala nke ihu igwe n’uwa nile nwere ike ijiko ya na igbanwe ihe ndi ozo na ihe edere site na ihe omuma nke meworo n’ime otutu iri nke etinyegoro ha.
N'ihi data nke ihe owuwu ndị a anakọtara kemgbe ọtụtụ iri afọ, otu nyocha ahụ enweela ike ịme nyocha nke data okpomọkụ nke Iberian Peninsula site na 1940. N'etiti data edere na nyochaa, a chọpụtala mgbanwe na ọnọdụ spatio-temporal nke okpomoku gburugburu ebe ndị ahụ, nke na-egosi akara ngosi mgbanwe mgbanwe ihu igwe.
Mee ka ugbo ikuku di nma
Ozugbo enwetara ma nyochaa data ahụ, ha dị iche iche iji mara mmekọrịta nke mgbanwe ndị a na usoro okpomọkụ nwere na ọgbọ nke ike ikuku. Ọ bụrụ na anyị nwere ike ịkọ ifufe nke a ga-eme n'ụzọ ziri ezi karị na ebe ọ ga-akachasị akachasị ike, anyị nwere ike ịkwado ma bulie arụmọrụ nke atụmatụ ikuku ifufe.
Nnyocha a na-eme akụkụ nke OMEGA-CM Project, nke Ngalaba Mmụta nke Community nke Madrid kwadoro. Otu nyocha a, nke ndị dọkịta bụ Antonio Caamaño na Sancho Salcedo-Sanz duziri, bụ nke ndị nchọpụta si mahadum atọ: Mahadum Rey Juan Carlos, Mahadum Alcalá na Mahadum Madrid Polytechnic.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Ha mepụtara ngwa ọrụ ọhụrụ iji mara ihe ịrịba ama nke mgbanwe ihu igwe
Kedu ihe kpatara oke ifufe mmiri karịa ebe enwere ọtụtụ ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri?
Olulu mmiri nke Darvaza. Ọnụ tozọ Hel